Ejipta: Homboy i Scheherazade · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2010 3:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, عربي, srpski, English
Tamin'ny volana Aprily 2008, dia vodona mafy tany amin'ny ambavafony ny fahalalahana miteny sy ny famoronana any Ejipta noho ny fangejana ny BD ho an'olon-dehibe noforonin'i Magdy El Shafee's – Metro. Nametraka ny raharaha teo anivon'ny fitsarana ilay mpanoratra sy ny trano mpanonta ny bokiny kanefa tsy nahazo y rariny. Voapanga ho maniratsira an'Andriamanitra sy manimbazimba ny maha-kristiana i Dr Youssef Zidane noho ny bokiny mitondra ny lohateny hoe Azazeel (Beelzebub). Mety ho voatana an-tranomaizina mandritra ny dimy taona i Zidane. Androany dia voapanga ho vetaveta i Scheherazade ao amin'ny alina 1001 ary te hahita azy ho faty ny sasany amin'ireo mpahay lalàna – tamin'ny antson'izy ireo ny amin'ny fanalàna ny boky!
The Chronikler nanoratra:
Herinandro vitsy lasa izao, rehefa niezaka ny hangeja ny fomba fisafidianana ny vakiteny ataon”ireo Egyptiana amin'ny fiantsoana azy ireo hanakana ny fivoahan'ilay boky vaovao Alina arivo iraik'amby amin'ny endriny vaovao izay be mpitia sy ahitàana ireo ‘personnages’ tsy lefin'ny taona ao anatiny, ao anatin'izany i Aladdin, Ali Baba ary Sindbad, ny vondrona iray mitonona ho Mpahay Lalàna Tsy mifato-tànana (somary miaro eson-teny kely) . Ny anton'izany? Ireo tahiry nandalo taonjato ireo dia “vetaveta” ary mety hahatonga ireo olona ho “veta saina sy hanota”.
Soa ihany, nifanome tànana hiaro ireo tantara tsara ireo ny manampahaizana Ejiptiana, nampitandrina mikasika ny fisosohan”ny “Bedouinisation” amin'ny kolontsaina Egyptiana. Ity dia, mety ho, ohatra mampihomehy indrindra amin'ny firehana vaovao, izay antsoiko hoe, fanamelohana mihatra amin'ireo asa efa nivoaka.
Zeinobia miheritreritra fa Scheherazade dia nanome anatra mikasika ny fiainana tamin'ny vadiny tao anatin'ny Alina 1001 indrindra amin'ny politika sy ny fahaizana mitantana, izay no mahatonga ireo olona te hahita azy ho faty.
Mampalahelo i Scheherazade , nanao an'izany izy ary navotan'ireo tantarany ireo ny fiainany fahiny tahaka ny amin'izao fotoanan'ny fivoarana izao izay maro no miezaka mandrara ireo tantara nanavotra azy sy ireo zanakavavin'ny fireneny tanatin'ny Alina 1001 !!
Tsy vao voalohany izao no nitranga fa efa nitranga ihany koa ity taloha rehefa naniry ny handrara ny fanontana ity boky ity ireo mpahay lalàna tamin'ny 1985.
Mechanical Crowds dia tsy faly amin'ny fomba fitondran'ny Ejipta ny fahalalahana miteny:
Ny 9 jona, dia nanemotra ny raharaha mikasika ny fandrarana ity boky ity ny fitsarana; Banat Zayed miteny:
Mandritra izany, ny mpitoraka blaogy Ahmed Al Sabbagh dia nametraka rohy azo hakàna ity boky ity.